Inhloko ZeNdaba Mabasa 19, 2021
Abogatsha lwezempilakahle babika ukuba kusiya tshona ilanga layizolo besekuhlatshwe abantu abazinkulungwane eziphose zifike amakhulu amathathu- 278,583, ijekiseni yeCOVID-19 Vaccine.
Inani lasebetholakale beleCovid 19 lokhu laqhamukayo eZimbabwe nyakenye, sebezinkulungwane ezingamatshumi phose amane- 37,751. Okulinani eligoqela inkulungwane ezingamatshumi edlula amathathu lanhlanu- 35,019, labagule basila kulumkhuhlane, wabulala abedlula inkulungwane eyodwa lengxenye-1,553.
Abalwa impi yenkululeko yaeZimbabwe bathi ilanga likazibuse selaphela isisindo kulandela ukwehluleka kokugcwaliswa kwezimiso ezabafuqa ukuya empini ngoba izithelo zikazibuse zisezandleni zabalutshwana njalo inengi labantu ezweni baqhubeka bephila nzima ukwedlula ilizwe lingakatholi uzibuse.
Inhlanganiso ye Active Youth Zimbabwe ithi isiqale uhlelo lokukhuthaza abasakhulayo asebeqhelise ukusebenzisa izidakamizwa koBulawayo ukuthi bazi ingoozi zokusebenzisa izidakamizwa lezi.
Umqeqetshi weqembu lomdlalo wenguqu ele Highlanders uMandla Mpofu uthi kungabe kungabahambelanga kuhle emdlalweni wenkezo ye Independence kodwa indlela abafana bakhe abadlale ngayo imupha isibindi esokuba iqembu leli lizaqhuba kuhle lonyaka.
Ku Livetalk namhlanje kuhlelo sikhangela ukunanzwa kwelanga likazibuse eZimbabwe lonyaka okomnyaka wesibili ilizwe limelana leCovid 19 lokuqhubeka kohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni lokuvikela umkhuhlane eleVaccine.